Madaxweynaha Hirshabeele oo shaaciyay halka lagu qaban doonno doorashada Aqalka sare (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweynaha Hirshabeele oo shaaciyay halka lagu qaban doonno doorashada Aqalka sare (DHAGEYSO)
Kadib caleemo saarkii madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ee shalay lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayuu madaxweynuhu shaaciyay in maamulkiisa uu soo de-dejin doonno soo xulista xubnaha Hirshabeele u matalaya Aqalka Sare ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamulkiisa uusan ka hari doonin maamulada kale ee soo doortay xubnaha Aqalka sare u matalaya, waxa uuna xusay in wada-tashiyo badan uu la sameyn doonno bulshada labada gobol islamarkaana ay soo de-dejin doonaan doorashada Aqalka sare.
Sidoo kale, madaxweyne Cali C/laahi Cosoble ayaa cadeeyay in doorashada xubnaha Hirshabeele u matalaya Aqalka sare iyo mida Hoose lagu qaban doonno magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, isagoona dhinaca kale meesha ka saaray in doorashadaasi ay ka dhaceeyso meel aan aheyn Jowhar.
Hadalkaan kasoo baxay madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa meesha ka saareysa hadalo mudooyinkii ugu dambeeysay soo baxayay oo ahaa in xubnaha Hirshabeele u matalaya Aqalka sare iyo tan hoose ee baarlamaanka Soomaaliya lagu dooran doonno magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeele ayaa la filayaa in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ay ku doortaan xubnaha Hirshabeele u matali doonna Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana la filayaa in doorashadaasi ay sida ugu dhaqsiyaha badan u dhacdo maadaama inta badan maamulada kale ay soo doorteen xubnihii u matalaayay Aqalka Sare.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa kusoo beegmaya xilli Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif uu si weyn uga soo horjeestay shirka lagu dhisay maamulka Hirshabeele, islamarkaana uusan marnaba tagi doonin magaalada Jowhar oo haatan xarun u ah maamulka ay ku mideysan yihiin gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe ee Hirshabeele.